Load Break Switch (LBS) mpanamboatra & mpamatsy - Factory Load Break Switch (LBS) China
FZW32-40.5 (RD) andian-dahatsoratra avo làlan'ny valantsoratr'efatra avo lenta
FZW32-40.5 AC ivelan'ny herinaratra avo lenta tapaka fantsom-bokatra fanapahana volo dia vokatra vaovao mandany traikefa efa an-trano efa misy enta-mavesatra famindrana entana famokarana sy ny teknolojia mandroso any ivelany mba hamolavolana sy olona ufact ire. ny jiro fanapahana enta-mavesatra dia misy ny fanapahana elatra, ny fantsom-pifandraisana ary ny mekanisma fandidiana. arc arc famonoana, misy fahamendrehana toy ny fahaizan'ny arc famonoana mahery vaika, fampisehoana azo antoka, androm-piainana lava, volume kely, tsy misy loza atahorana ary tsy misy fandotoana envir ...
PGS Series High Voltage SF6 Load Break Switch
PGS-630A poste jiro mitaingina enta-mavesatra dia ampiasaina amin'ny famakiana ny voltatra 12/24 / 40.5kV, ny 630A ankehitriny, ny rafitra fizarana herinaratra 50 / 60Hz, ny fikatonan'ny enta-mavesatra ary ny fatran'ny rafi-pahefana ankehitriny, mety hanasaraka ny fizarana mandeha ho azy izy io fitsinjaram-pahefana izay misy lesoka. Ny switch dia mifanaraka amin'ny mpanara-maso elektronika izay miaraka amin'ny haitao farany. Ny switch dia manana maody manual, motera, fandidiana lavitra. Ny mpanara-maso elektronika dia hapetraka ao anaty stainles ...
FZW32-12 Andian-dahatsoratra an-kalamanjana ivelan'ny herinaratra mampiala volo hamindra vaky
1. Outline FZW32-12 karazana fantsom-pifandraisana an-kalamanjana any ivelany mamoaka fantsom-pialana volo dia karazana famindrana enta-mavesatra izay fampidirana traikefa matotra an'ny famindrana entana misy ao an-toerana sy famolavolana haitao mandroso an'ny ivelany. Ity switch fanapahana enta-mavesatra ity dia misy disconnector, interrupter vacuum ary ny mekanisma miasa ary ny faritra hafa. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fitsipiky ny interrupter vacuum, miaraka amin'ny fahaizan'ny arcing mahery vaika, fampisehoana azo antoka, androm-piainana lava, volavola kely, tsy misy fihoaram-pefy ...
FZRN21-40.5 Fanamafisana ny famoahana ny rivotra ao anaty trano
Toetran'ny tontolo iainana 1. Altitude: 1000m; 2. Ny mari-pana manodidina: -40 ~ + 40 ℃; 3. Ny hamandoana mifandraika: salantsalany isan'andro 95%, salan'isa isam-bolana 90%; 4. Hamafin'ny horohoron-tany: 8 degre; 5. Kilasy fandotoana: mari-pahaizana II. Masontsivana teknika TSIA. Entana misy ny sandan'ny isa 1 Volavolaina kV 40.5 2 Misy isa matetika Hz 50 3 Misy fatrany haingam-pandeha fuse A 63 4 1min mahery matetika mahazaka herinaratra kV 95/110 5 Taratra herinaratra mahazaka herinaratra kV 185/215 6 Misy laharana tampony mahazaka kA 50 7 .. .
FZN25-12 Andian-tsarimihetsika avo lenta ao anaty trano famoahana valisoa
FZN25-12 volo fantsom-bovoka anaty trano HV vahana fantsona AC 50Hz 12kV 3-phase .. ♦ Fomba fiasa: mekanisma fiasa lohataona, karazana tanana ary karazana elektrika misy; ♦ Karazan'asa: opérativa havanana amin'ny fandidiana havia d; ♦ Toro lalana: fandidiana havia, fandidiana havanana; ♦ Fampiharana: switchgear 12kv anaty trano. Toetran'ny tontolo iainana ♦ mari-pana manodidina: -25 ° C 〜 + 40 ° C; ♦ Altitude: <1000m (ambonin'ny haabon'ny ranomasina); ♦ Ny hamandoana mifandraika: salantsalany isan'andro <95%, isam-bolana av ...
FN12-12 andian-tsarimihetsika avo lenta ao anaty trano famindrana rivotra
Ny switch FN12-12 HV air load break break dia fitaovana 3-phase AC 50Hz 12kV switch anatiny. ♦ Fomba fametrahana: eo anoloana, eo amin'ny sisiny, atsipy; ♦ Fomba fiasa: rafitra fiasa lohataona, karazana tanana ary karazana herinaratra azo alaina; ♦ Karazan'asa: fandidiana havanana sy fiasa havia; ♦ Fampiharana: switchgear 12kv anaty trano. Toetran'ny tontolo iainana ♦ mari-pana manodidina: -25 ° C 〜 + 40 ° C; ♦ Altitude: <1000m (ambonin'ny haabon'ny ranomasina); ♦ Ny hamandoana mifandraika: salantsalany isan'andro <95%, volana ...
FN7-12 Andian-dahatsoratra avo lenta ao anaty trano famindrana rivotra Load Break Switch
FN7-12 dia karazana fiovaovan'ny rivotra avo lenta avo lenta ao anaty rivotra. Izy io dia mety amin'ny AC 50Hz, rafitra herinaratra AC 12Hz miisa 12kV, ho toy ny fijanonan'ny enta-mavesatra sy ny fikatonan'ny faribolana fohy. Karazana famaritana toe-javatra miasa ● mari-pana manodidina: -25 ° C ~ 40 ° C; ● Altitude: <1000m; ● Ny hamandoana mifandraika: salan'isa isan'andro <95%; Salanisan'ny volana <90%; ● Tsy tokony hisy gazy mandrehitra, may ary mandrehitra na etona mipoaka eo amin'ilay toerana; ● Tsy misy hovitrovitra mahery setra matetika. Technica ...
FN5-12 andian-tsarimihetsika avo lenta ao anaty trano famindrana rivotra
FN5-12 karazana AC switch anaty herinaratra avo lenta famerenanana biriky (Ity dia antsoina hoe switch break switch) paoma mankany amin'ny tamba-jotra AC 50Hz 12kV, ho an'ny famotehana ny enta-mavesatra ary ny famaranana ny fantsom-pifandraisana fohy. Load break switch amin'ny fuse dia afaka manapaka ny lalan-kely misy ankehitriny mba hiarovana ny switch. Ny switch switch break dia azo ampiasaina amin'ny mekanisma fandidiana manual CS6-1, ary ity vokatra ity dia mampiasa mekanisma miasa manual CS. Fampiharana FN5-12 karazana AC AC ao anaty lozam-pifamoivoizana avo lozam-pifandraisana (Eto ...